Avy tany Thailand ka hatrany Kambodia ~ Journey-Assist - Avy any Kambodza ka hatrany Thailandy
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Avy tany Thailand ka hatrany Kambodia
Avy tany Thailand ka hatrany Kambodia. Avy any Kambodza ka hatrany Thailandy
Ahoana no ahatongavana any Thailand ho any Kambodza
Visa mankany Kambodza
Ny mpizaha tany avy any Etazonia taloha izay mikasa ny hitety tanàna any Kambôdza avy any Thailand dia tsy maintsy hahazo visa. Misy fomba 4 hahazoana izany:
Ny safidy malaza kely indrindra dia ny mifandray amin'ny masoivoho. Mitentina $ 37 $ ny visa iray amin'ity tranga ity. Mila mameno fangatahana fanontaniana ianao ary manome sary miloko misy 4 ka hatramin'ny 6 sm. Ny maha-pasipaoro pasipaoro vahiny dia tsy tokony ho latsaky ny 6 volana manomboka amin'ny datin'ny fidirana ao amin'ny faritr'i Kambodza. Navoaka ao anatin'ny 30 minitra eo ho eo ny visa iray.
Makà visa elektronika. Vidiny - $ 30; antontan-taratasy toy izany dia nalaina tao amin'ny tranokalan'ny masoivoho. Ny fotoam-panombohana fampiharana dia 3 andro. Amin'ity tranga ity dia fandefasana valiny ny adiresy imailaka izay voafaritra mandritra ny fisoratana anarana.
Makà visa visa avy eo amin'ny sisintany Thailand-Kambojiana. Clearance dia tanterahina amin'ny fotoana fidirana ao amin'ny faritr'i Kambodza amin'ny toeram-pisavana. Tsy maintsy mameno fangatahana fanontaniana ianao, ary koa mandoa vola $ 20.
Raha mikasa ny handeha ho any Kambodza ianao amin'ny fiaramanidina, afaka mamoaka visa ny seranam-piaramanidina ao amin'ny seranam-piaramanidina Kambodza (any Phnom Penh na any Siem Reap).
Miaraka amin'ireo safidy rehetra ireo, visa dia navoaka mandritra ny 30 andro.
Amin'ny fiara fitaterana mankany Kambodza
Mandeha any Aranyaprathet tanànan'ny sisintany Thailand, miala amin'ny tanàna lehibe any Thailand any avy any amin'ireo izay akaikin'ny sisin'ity firenena ity miaraka amin'i Kambodza. Ny safidy iray dia ny fisavana fiara fitetezam-paritany, tapakila ahafahanao mividy ao amin'ny Station Bust Pattaya Avaratra (ny vidiny dia ho 250 baht). Ny tombony azo amin'ity safidy ity: seza mampahazo aina, izay miverina ao aoriana, ary fantsom-pifandraisana amin'ny salon.
Azonao atao ihany koa ny mampiasa minibus. Io karazana fitaterana io dia tsy tena mahafinaritra, fa ny lalana dia mitaky fotoana kely kokoa noho ny fiara fitateram-bahoaka. Ankoatr'izay, ireo minibus dia hisintona anao mivantana avy amin'ny hotely na avy amin'ny biraon'ny masoivoho fitetezana izay nivarotra ny tapakila. Hanodidina ny 350 baht ny vidiny. Mandritra ny 4 ora eo ny dia mankany amin'ny sisintany Kambodza, ary hisy fijanonana marobe eo amin'ilay lalana.
Azonao atao koa ny manome baiko ny sisintany mankany amin'ny sisin-tany. Amin'ity tranga ity, ny vidiny rehefa miala any Pattaya dia ho antonony 1 baht.
Izay fiara moto (bus, minibus, taxi) dia hitondra ho anao mankany amin'ny sisintany ihany, izany hoe mankany Aranyapratet. Ilaina ny hiampitana ny sisintany mandeha an-tongotra, dia mila mifindra any anaty fiara fitaterana malalaka ianao, izay mivoaka eto an-tanànan'i Siem Reap, na amin'ny fiarakaretsaka.
Amin'ny lamasinina any cambodia
Avy amin'ny gara ao Bangkok ka hatrany Aranyaprathet, mandao indroa isan'andro ny fiaran-dalamby. Ao amin'io lalana io ihany no mandeha fiara kilasy 3, izay azo ampitahaina amin'ny lalamby mandeha amin'ny herintsika. Ny dia mankany amin'ny sisintany dia mitaky 6 ora eo ho eo. Ny vidin'ny tapakila dia 50 baht ihany. Ny fiaran-dalamby, toa ny fiara, dia afaka mitondra anao amin'ny sisin'ny sisintany ihany.
Amin'ny fiaramanidina any cambodia
Ity safidy ity no haingana indrindra sy lafo vidy. Sidina tsy tapaka manomboka any Thailandy no misy ny Kambodza dia misy sidina telo - ireo dia Air Asia, Thai Airways ary Bangkok Airways. Ny tapakila mora indrindra (farafahakeliny 1 800 baht) dia atolotry ny Air Asia. Raha mamaky tapakila mialoha ianao dia afaka manome vidiny mora kokoa. Ny orinasa tsirairay etsy ambony dia manolotra fihenam-bidy ho an'ny mpandeha, noho izany antony izany dia tsara kokoa ny mandany fotoana kely mampitaha ireo safidy sy ny hamonjy.
Ny fiaramanidina mankany Cambodia avy any Thailand manidina avy any Bangkok (avy amin'ny seranam-piaramanidina roa - Don Muang sy Suvarnabhumi) ary Phuket. Tany Kambodza, dia tonga tao Phnom Penh sy Siem Reap izy ireo. Ny isan'ny sidina vita isan'andro dia faritan'ny vanim-potoana.
Ny seranam-piaramanidina Phnom Penh dia misy 7 km miala amin'ity tanàna ity, noho io antony io, rehefa avy mandao ny fiaramanidina ianao dia mila miantso taxi iray, izay hitondrana 3 $. Any amin'ny seranam-piaramanidina Kambodziana dia afaka mangataka visa ianao raha tsy navoaka mialoha ny nahatongavany.
Amin'ny fitaterana rano any cambodia
Ho an'ny safidy io, tsy maintsy hifandray amin'ny masoivoho mpitsangatsangana ianao aloha. Ny faritra fanombohana ny ankamaroan'ny lalan-drano avy any Thailand ka hatrany Kambodia dia ny seranan-tsambo Thailandey any Laem Chabang, 25 km miala Pattaya ary 130 km miala an'i Bangkok. Teny an-dalana, hiditra ny tanànan'i Sihanoukville sy ny manodidina ny sambo. Con. Ny vidin'ny fitsangatsanganana toy izany dia misy dikany lehibe (farafaharatsiny 8 baht).